သင်အမေရိကန်နိုင်ငံကနေကနေဒါခိုလှုံခွင့်ရနိုင်? | USAHello | USAHello
ကနေဒါခိုလှုံခွင့်သင်နှင့်သင့်မိသားစုများအတွက်လုံခြုံရွေးချယ်မှုရဖို့ကြိုးစားနေသည်? သငျသညျကို USA မှထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ရှေ့တော်၌ထိုအန္တရာယ်များအကြောင်းကိုလေ့လာပါ.
ရှင်ပေါလု Chiasson နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ.
တချို့ကဒုက္ခသည်များ, asylees, နှင့်အခြားရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိသူတို့၏အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမရေမရာခံစားနေကြ. နှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက် USA တွင်ပါပြီ. သူတို့ကမိသားစုများရှိ, အိမ်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ. သူတို့ကဘေးကင်းလုံခြုံမခံစားရဘူး, ဒါပေမယ့်နောက်ကျောမူရင်းသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်သွားဖို့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်.
လည်း, အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနကလူထောင်ပေါင်းများစွာ၏မူလ TPS အဆုံးသတ်ရန်စီစဉ်. အတော်များများက TPS ကိုင်ဆောင်သူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစွန့်ခွာရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးလိမ့်မည်.
USA တွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများကနေဒါခိုလှုံခွင့်ရရန်ကြိုးစားရန်ထွက်ခွာခဲ့ကြ. သူတို့ကအဲဒီမှာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရရန်ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်ယုံကြည်.
သို့သော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်အရာရှိတစ်ဦးကနယ်စပ်မှာကနေဒါဝင်သူကိုလူအများစုကနေဒါဒုက္ခသည်တစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုလုပ်မပေးနိုငျ. ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်နိုင်ငံအကြားသဘောတူညီချက်သည်. ဒါကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားထောင်ပေါင်းများစွာ၏တရားမဝင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်နေကြ. သူတို့တိုင်းပြည်အတွင်းမှဖြစ်ကြသည်တစ်ချိန်ကသူတို့ကနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်.
သငျသညျနားထောငျဖတ်အတော်များများကအမှုအရာကြောင့်ကနေဒါမှာရှိတဲ့ခိုလှုံခွင့်ရရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရန်သင့်အားဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ. ဒါပေမယ့်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရရန်အလွန်ခက်ခဲသည်. နှင့်ကနေဒါမှာရှိတဲ့တရားမဝင်ရောက်ရှိလာဖို့အန္တရာယ်များရှိပါတယ်.
သင်သည်မည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခင်မှာ, အောက်ကဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ကနေဒါအစိုးရအနေဖြင့်ဤစာမျက်နှာကိုဖတ်ပြီး ကနေဒါဟုဆိုကာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် - အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်?
ဤဗီဒီယိုအားလည်းရရှိနိုင်ဖြစ်ပါသည် Creole အဘိဓါန် နှင့် စပိန်.
ကနေဒါရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများမှဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သနားကြင်နာတတ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းများအတွက်ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်. ၎င်း၏ခေါင်းဆောင်များသူတို့ဒုက္ခသည်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ပြောဆိုကြပြီ. ကနေဒါအသစ်ရောက်ရှိလာသောအလွန်အခွင့်အလမ်းများပူဇော်ဟန်. ဤဖြစ်စဉ်အားလုံးသည်အချို့ရွှေ့ပြောင်းများအတွက်မှန်, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေများအတွက်အဖြစ်မှန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်:
အတော်များများကရွှေ့ပြောင်းခိုလှုံခွင့်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီပါဘူး. သငျသညျအရည်အချင်းပြည့်မှီဘူးဆိုရငျ, သငျသညျဖြစ်ကောင်းမူရင်းသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးလိမ့်မည်, ဥပမာအားဖြင့်ဟေတီသို့မဟုတ် El Salvador များအတွက်. သငျသညျ United States ကိုပြန်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျခိုလှုံခွင့်တောင်းဆိုခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်ရင်တောင်, သင့်အမှုကြားသိမီသင်ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်. ကနေဒါလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်၏တစ်ဦး backlog ရှိပါတယ် 40,000 အမှုပေါင်း. သင်တစ်ဦးဆုံးဖြတ်ချက်အရမှီကနှစ်နှစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်, သို့သော်, သငျသညျအလုပျမှအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ခွင့်ပြုချက်ရကြလိမ့်မည်.
ကနေဒါအစိုးရရှိပါတယ် တိကျသောလိုအပ်ချက်များ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဒုက္ခသည်တစ်ဦးအဖြစ်ယူဆခံရဖို့အတှကျ. သူတို့ကိုသင်ဖြည့်ဆည်းမထားဘူးဆိုရင်, သငျသညျစွန့်ခွာဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခံရ. အစိုးရကအမေရိကန်ကနေလာမယ့် TPS ကိုင်ဆောင်သူအဘို့အဘယ်သူမျှမကအထူးအစီအစဉ်များရှိပါတယ်.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်ဥပဒေရေးရာ entry ကို
အချို့သောလူများအတွက်, အမေရိကန်အနေဖြင့်တရားဝင်ရောက်ရှိလာသောကနေဒါခိုလှုံခွင့်တောင်းဆိုဖို့ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ခြွင်းချက်လေးမျိုးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဖြစ်ပါသည်:
ဒီခြွင်းချက်နှင့် ပတ်သက်. Read ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကနေဒါအစိုးရစာမျက်နှာ. အဆိုပါချွင်းချက်တစ်ခုမှာသင်တို့ဆီသို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိအချက်အလက်တွေကနေကြွလာ ကနေဒါအစိုးရ နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာကနေဒါသွား၏အန္တရာယ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသစ်ရောက်ရှိလာသောပညာပေးဖို့ရည်ရွယ်သည်. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.